Kuongorora uye kuvandudza kweakajairika matambudziko ehutano mukupedzisa machira
Kuruka Lace Trim
Yakarukwa Lace Mucheka
Nylon & spandex machira
Cotton & nylon jira
Mucheka we Eyelash
Kemikari Lace Trim
Chemical Lace Mucheka
Embroidery Lace Mucheka
1. Zvinetso zvehunhu zvakajairika mukupedza zvakapfava:
Haugone kusvika kune yakakodzera kunzwa:
Maitiro akapfava ekupedza zvakapfava anosiyana nezvinodiwa nevatengi, senge zvakapfava, zvakatsetseka, zvakapfava, zvakapfava, zvakatsetseka, zvakaoma, nezvimwewo, zvinoenderana nemaitiro akasiyana sarudza zvinyoro zvakasiyana. Semuenzaniso, mune iyo firimu, kune akasiyana masekisheni eanopfaira firimu, ayo manyoro, kusaenzana, kutsvedza, yero, inokanganisa machira ekudzivirira akasiyana; Mune silicone mafuta, zvivakwa zveakashandurwa silicone oiri nemajini akasiyana akachinjaniswa zvakare akasiyana, senge amino silicone mafuta, hydroxyl silicone mafuta, epoxy yakagadziriswa silicone mafuta, carboxyl yakagadziriswa silicone mafuta zvichingodaro.
Ruvara runoita yero:
Kazhinji neimwe chimiro chemufirimu uye amino silicone mafuta anokonzerwa neamino yero. Mufirimu, cationic firimu yakapfava, inzwa yakanaka, kushambadzira kuri nyore pamucheka, asi zviri nyore kuita yero discoloration, hydrophilic, senge cationic firimu inogadzirisazve mune yakapfava mafuta oiri, yero ichaderedzwa zvakanyanya, iyo hydrophilic zvakare inofanirwa kugadzirisa, senge cationic composite firimu uye hydrophilic silicone mafuta, kana nehydrophilic yekupedzisa mumiriri wemubatanidzwa, ichavandudza ayo hydrophilicity.
Anion firimu kana isiri - ion firimu haisi nyore kuita yero, imwe firimu haina yero, zvakare haina kukanganisa hydrophilicity.
Amino silicone oiri ndiyo inonyanya kushandiswa mafuta esilicone parizvino, asi nekuti amino inokonzeresa shanduko yemavara uye kuita yero, iyo yakakwira iyo ammonia kukosha, iyo yakanyanya kuita yero, inofanira kuchinjwa kuita yakaderera yero amino silicone mafuta kana polyether yakagadziridzwa, epoxy yakagadziriswa silicone mafuta asiri nyore kuita yero.
Uye zvakare, cationic surfactants senge 1227, 1831, 1631 dzimwe nguva anoshandiswa mu emulsion polymerization se emulsifiers, ayo anogona zvakare kugadzira yero.
Kana emulsifying oiri yesilicone, iko kushandiswa kweiyo emulsifier, ayo "ekukurura maitiro" akasiyana, inokonzeresa mamiriro akasiyana ekukurura uye mwenje mwenje, kwave iko kuchinja kwemavara.
(3) machira hydrophilicity akaderera:
Kazhinji inoshandiswa mafirimu mamiriro matambudziko uye silicone oiri mufirimu mushure mekushomeka kwekutorwa kwemvura geni, uye yakavharwa senge cellulose fiber hydroxyl, mvere carboxyl, amino uye imwe nzvimbo yekumwa mvura yakakonzera kuderera kwekutorwa kwemvura, inofanirwa kusarudza kwese kwazvinogona anion, isiri-ionic firimu uye hydrophilic mhando yesilicone mafuta.
(4) nzvimbo dzakasviba:
Chikonzero chikuru ndechekuti jira harina kucheneswa pamberi pekurapwa, uye ruvara rwacho rwune rima kana uchidhaya. Kana furo yakawandisa mubhati yekushambidza, furo uye juzi remaruva, musanganiswa wedhayi pamucheka; Kana kusvibisa mumiririri inoyerera mafuta inokonzerwa nerima mafuta nzvimbo; Kana tarred zvinhu mune dhayi VAT pane jira; Kana dhayi mumamiriro akasiyana siyana inokwenenzverwa munzvimbo dzine rima; Kana iyo calcium calcium magnesium ion yakawandisa uye dhayi inosanganiswa mumucheka uye zvimwe zvikonzero. Kutariswa kurapwa, senge pre-kurapwa kuwedzera iyo oiri mumiririri yekunatsa, kudhaya AIDS kushandisa yakaderera furo, hapana furo zvinowedzerwa, defoaming mumiriri kusarudza mhando isingasvetuke mafuta, wedzera chelating vamiririri kusimudzira mhando yemvura, wedzera solubilizing dispersant kudzivirira dhayi kuumbana, yakakodzera kushandisa yekuchenesa mumiririri yekuchenesa iyo humburumbira.
(5) mwenje mavara:
Chikonzero chikuru ndechekuti kurapwa kusati kwafanana, zvimwe zvikamu zvevarombo Mao Xiao, zvakaramba kudhaya, kana nekuramba kudhaya zvinhu, machira kana kurapwa pamberi ne magnesium calcium sipo, sipo, nezvimwewo, kana sirika isina kuenzana, isina kuenzana kana semi-chigadzirwa kuti chiome, kana jira rine rakanyungudutswa sodium sulphate, soda ash uye zvimwe zvakaomarara, kana dhayi usati waomesa madonhwe emvura, kana kudhaya kugadzirisa zvakapfava kupedzisa nezvakawedzerwa zvakadai semastain. Saizvozvo, inofanirwa kuve yakanangwa kurapwa, senge kusimbisa pre-kurapwa, pre-kurapwa anobatsira mumiririri kusarudzwa hakufanirwe nyore kuumba calcium uye magnesium sipo, pre-kurapwa kunofanirwa kuve yunifomu uye zvakakwana (izvi zvinoenderana nekusarudzwa kweanokwikwidza mumiriri, anopinda mukati. , kubiridzira inopararira, inopinza inopinda, nezvimwewo), sodium sulfate, soda inofanira kunge iri muVAT uye inofanira kusimbisa manejimendi ekugadzira.
6. Alkali gwapa:
Chikonzero chikuru ndechekuti kubviswa kwealkali mushure mekurapwa kwepamberi (senge kubhenesa, mercerization) haina kuchena kana yunifomu, zvichikonzera chizvarwa chealkali, saka isu tinofanirwa kusimbisa maitiro ekubvisa alkali munzira yekufanotangisa.
Panogona kunge paine zvikonzero zvinotevera:
A. Iyo firimu zvinhu hazvina kunaka, kune block block inonamatira kune iyo jira;
B. Mushure meiyo firimu zvinhu furo yakawandisa, mumucheka kunze kwesirinda, jira rine softener furo mavara;
C. Hunhu hwemvura hahuna kunaka, kuomarara kwakanyanya, kusvibiswa kuri mumvura uye softener bond agglutinate pamucheka. Mamwe mafekitori anotoshandisa sodium hempetaphosphate kana alum kurapa mvura, izvi zvinhu uye marara mune fomu yemvura inoyerera, kupinda mubhawa nyoro yekurapa mushure mejira remucheka nemavara;
D. Jira pamusoro ne anion zvinhu, mune yakapfava kugadzirisa, uye cationic softener inosanganiswa kuita matanga, kana jira pamusoro nealkali, kuitira kuti softener condensation;
E. Softener chimiro chakasiyana, zvimwe pamatembiricha akakwirira zvinoita kuti softener kubva kune emulsified nyika ive slag inotevedzera jira uye zvichingodaro.
F. Iyo yekutanga tara-senge softener uye zvimwe zvinhu musilinda zvakadonha ndokunamatira kune jira.
Silicon oiri mavara:
Urwu ndirwo rudzi rwakaomesesa rwemavara, zvikonzero zvikuru.
A. Mucheka PH kukosha hakuna kusvika kwazvakarerekera, kunyanya nealkali, zvichikonzera silicone oiri demulsifier mafuta ari kuyangarara;
B. Kuchenesa mvura yemhando yepamusoro yakashata kwazvo, kuomarara kwakanyanya, silicone mafuta mu> 150PPM kuomarara kwemvura kuri nyore kuyangarara mafuta;
C.Matambudziko emhando yesilicone mafuta anosanganisira asina kusimba emulsification (kusarongeka kusarudza emulsifier, mashoma emulsification maitiro, akakurisa emulsification particles, nezvimwewo) uye shear kuramba (kunyanya matambudziko esilicone mafuta pachawo, senge silicone oiri mhando, emulsification system, silicone mafuta mhando, silicone mafuta synthesis maitiro, nezvimwewo).
Iwe unogona kusarudza silicone mafuta isingagadziriswe neshear, electrolyte uye PH shanduko, asi iwe unofanirwa kutarisisa kushandiswa kwesilicone mafuta uye nharaunda yayo. Iwe unogona zvakare kufunga nezve kusarudza hydrophilic silicone mafuta.
9. Urombo fluff:
Fluff ine hurombo hwekukanda muchina mashandiro (senge tension kudzora, murwi chinotenderera kumhanya, nezvimwewo) kune hukama hwepedyo, hwekurara, softener (unowanzozivikanwa sewakisi), ine simba uye isingachinjiki kukakavara coefficient ndiyo kiyi yekudzora machira, kugadzirira kiyi yeiyo fuzz softener, kana iyo yakanyorova ine varombo, inotungamira zvakananga kune yakashata fluff, kunyange kukonzera blah kutyorwa kana upamhi shanduko.
2. Zvinetso zvehunhu zvakajairika mukupedzisa kwebwe.
Nekuda kweiyo yemahara formaldehyde mune resin kana n-hydroxymethyl chimiro cheiyo resin kuora kweiyo formaldehyde inokonzerwa neiyo formaldehyde zvemukati kupfuura muganho. Super yakaderera formaldehyde resin kana isiri - formaldehyde resin inofanira kushandiswa.
Ehe, sosi yechinetso che formaldehyde yakafara kwazvo, senge kugadzirisa mumiriri Y, M, softener MS - 20, S - 1, isina mvura mumiririri AEG, FTC, namira RF, murazvo unodzora THPC uye zvimwe zvinowedzera dzimwe nguva zvinokonzeresa kuti formaldehyde inodarika iyo mureza. Panguva imwecheteyo, kutama kwe formaldehyde mumhepo kunogona zvakare kukonzera yakawandisa formaldehyde pamucheka.
Jena kana dambudziko rekuchinja ruvara:
Resin kupedzisa, kazhinji kunokonzeresa kuita yero, saka kudzora kukosha kwePH kwesimbi yekupedzisa mumiriri, iine acid zvikamu, zvinokonzeresa zvinhu, sekugona kwazvinoita kudzora yero, shanduko yerudzi.
(3) yakasimba kudzikira dambudziko:
General nebwe kupedza achabereka yakasimba kuderera, anogona kuwedzerwa faibha unodzivirira mumiririri, akadai oxidized polyethylene wakisi emulsifier.
General resin kupedzisa kunokonzeresa kuti chiitiko chekunzwa kuomesa, chinogona kuwedzerwa zvinyoro nyoro, asi hazvifanire kukanganisa mhando yeinopedzisa. Inzwa kuvandudzwa, kugadzirisa dambudziko rekudonha kwesimba kwakagadziriswazve zvakanyanya. Asi iyo inonzwa kuti pamusoro resin zvinokonzeresa zvinotumira kumirira zvakaoma kuti dambudziko rikonzereswe nechikonzero senge resini pachayo uye nekuomesa, kuda kuenderera nekuvandudza zvirinani.
3. Mamwe matambudziko ehunhu:
(1) ayoni esimbi akawandisa:
Metal ions, Cu, Cr, Co, Ni, zinc, Hg, As, Pb, Cd mune zvekutengesa zvigadzirwa zvakaita sekuyedza, kana zvakanyanyisa, zvakare kune zvakakomba mhedzisiro, senge formaldehyde mune vanobatsira, iyi mhando yesimbi ion ishoma, asi mamwe yezvokuwedzera zvinogona kukonzera kunyanyisa, seMurazvo unodzora antimony trioxide emulsion ine yakawanda mercury, inodzivirira mvura mumiriri Cr, PhoboTexCR (ciba), Cerolc (sandoz) ine chromium. Kana mvere dzakarukwa nedhayi yepakati, dhayi yepakati inoshandiswa potassium dichromate kana sodium dichromate kana sodium chromate, Cr6 + inodarika muganho.
Ruvara shanduko dambudziko:
In mushure mekupedzisa, shanduko yemuvara yakawanda, inofanirwa kutarisisa pakusarudza dhayi pakusarudza, kana kudhaya proofing, inofanirwa kuenderera ichipedzisa zvinoenderana nemaitiro, ichapenda pakupedzisa kwekutonga kuti usarudze mune rekubatsira basa rakapihwa kune kukwezva, hongu, zvaive nani kusarudza kusakonzeresa shanduko yemuvara mushure mekupedzisa mumiriri ndiyo mhinduro kwayo, asi izvi zvinogona kazhinji kuve nemipimo (senge antibacterial mumiriri ine mhangura pachayo ine ruvara, inodzivirira mumiririri zvakare ine ruvara, iine chromium inogona kukonzera machira ruvara shanduko. ), pamwe nekutarisa iyo jira rakapendwa panguva yekuomesa kurapa mwenje mwenje uye shanduko yemavara inokonzerwa nedhayi sublimation uye kupisa kwakanyanya kunokonzerwa nezvinhu zvakaita seyero.
(3) APEO kuwandisa:
APEO sechiratidzo chakatemerwawo nedzimwe nyika, zviratidziro uye kufungidzira kwekumurova mumiririri, inopinda mumiririri, kudhinda kudhaya kweineti lotion, yekumesa mumiriri, kupfavisa mumiririri kana uchipedza zvese zvine hukama, senge emulsifier mune ino yanyanya kushandiswa TX, NP akateedzana eanoshanda seanobatsira mbishi zvinhu, ayo akaoma kudzivirira, nzira chete ndeyekuita dhayi fekitori kuomerera kushandisa kwezvakatipoteredza zvinowedzerwa, zvakanyatso gumisa zvine APEO uye zvine chepfu uye zvinokuvadza zvinhu zvinowedzerwa mufekitori.
Post nguva: Feb-26-2020
10F, Shanya International Center, Fuzhou Hi-tech Zone, Fuzhou Guta, 350108, Fujian, China